बाडुली किन लाग्छ ? बाडुली लाग्दा यसो गर्नुहोस - हरियाली नेपाल
नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला सुरुविकास र समृद्धिमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमन्त्री शाहीम्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’ समस्याजनगणनाः गाउँ पुगेका सुपरीवेक्षकलाई फोन र इन्टरनेटको समस्याआईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : नेपाल ओमान भिड्दैसंविधान दिवस : ताप्लेजुङमा हत्या मुद्दाका तीन जनाको आधा कैद सजाय मिनाहाअकस परमाणु सम्झौताः फ्रान्सेली विदेशमन्त्री भन्छन्, अस्ट्रेलियाले धोका दियोअसोज ११ गतेदेखि आईपिओ निष्काशन, कति कित्ता भर्ने ?राष्ट्रपतिद्वारा संविधान दिवसमा ९०३ जनालाई मानपदवी र विभूषण प्रदान (सूचीसहित)संविधान दिवस: मधेसमा दुई धार
बाडुली किन लाग्छ ? बाडुली लाग्दा यसो गर्नुहोस
Post published:२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०६:१७
काठमाण्डौंः बाडुली लाग्नु सामान्य प्रक्रिया हो । प्रायः केही समय बाडुली लागेर आफैँ रोकिन्छ । कहिलेकाहीँ बाडुली लामो समयसम्म लागिरहन्छ ।
हाम्रो छाती र पेटलाई छुट्याउने भागमा एउटा पातलो मासुको झिल्ली हुन्छ । हामीले सास लिंदा त्यो फैलिन्छ र सास फेरेपछि पहिलेकै अवस्थामा खुम्चन्छ । यसक्रममा त्यस झिल्लीले हाम्रो फोक्सोलाई फैलन र खुम्चिन मद्दत गर्छ । त्यस झिल्लीलाई ‘डायफ्रम’ भनिन्छ ।
त्यही डायफ्रममा कुनै कारणले उत्तेजना भयो भने त्यो अचानक खुम्चिनमात्रै पुग्छ र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्वरयन्त्रबीचको भाग बन्द हुन पुग्छ । बाडुली लाग्नु भनेको हाम्रो फोक्सो र वरिपरिका मांशपेशीहरुमा अचानक आउने खुम्चाई हो । जसले गर्दा हामी सास भित्र लिन पुग्छौं । खासमा हाम्रो मांशपेशी खुम्चिएपछि हाम्रो स्वास नलीलाई बन्द गरिदिंदा हिक–हिक आवाज आउँछ । यो अवस्थालाई नेपाली भाषामा ‘बाडुली लागेको’ भनिन्छ ।
बाडुली सामान्यतया केही मिनेट रहन्छ र पछि आफैं ठीक पनि हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निक्कै बेरसम्म पनि लागिरहन सक्छ । केही गरी हामीलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बाडुली लागिरह्यो भने त्यसो हुनुमा केही गम्भीर कारणहरु पनि हुन सक्छन् र हामीले तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्दछ ।
बाडुली किन लाग्छ रु यसको जवाफ अझै वैज्ञानिकहरुले किटेर भन्न सकेका छैनन् तर बाडुली लाग्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डको भागमा रहेको फ्रेनिक स्नायुमा पैदा हुने दबाबले निम्त्याउँछ । उक्त स्नायुले हाम्रो डायफ्रमको गति र श्वासप्रश्वासको क्रियालाई पैदा र नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तर ट्युमर वा मिर्गौलाका केही रोगहरु लाग्दासमेत हामीलाई बाडुली लाग्न सक्छ ।
त्यसो त, प्राचीन कालमा सबै प्राणी र मानिससमेत पानीबाट विकसित भएर जमिनमा आएको र त्यसबेला गिलले सास फेर्नुपर्ने प्राकृतिक नियमको अवशेषको रुपमा बाडुली रहेको मान्नेहरु पनि वैज्ञानिक जगतमा छन् ।
विशेष गरि फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार बाडुली लाग्नुको रहस्य हाम्रो जीव विकाशक्रमको कुरासँग जोडिएको छ र यसले के संकेत गर्छ भने मानिसको प्राचीन पुर्खा पनि कुनै बेला समुद्रबाटै उत्पति भएको जीवबाट विकास भएको हो । त्यसैले उनीहरुको विश्वास अनुसार बाडुली भनेको तिनै समुद्रमा बस्ने जीवको अवशेष हो ।
जुन बेला उनीहरु फोक्सोको माध्यमबाट नभई फुल्काको माध्यमबाट सास फेर्ने गर्थे । पछिल्लो समय पेरिसको अस्पतालमा क्रिस्चियन स्ट्राउसको नेतृत्वमा रहेका वैज्ञानिहरुको एक टोलीले गरेको दाबी अनुसार बाडुलीकै जस्तो प्रक्रियाले पानीमा बस्ने र फुल्काको मद्दतले सास फेर्ने जीवहरुको फुल्काको प्वाललाई खोल्ने र बन्द गर्ने क्रियालाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ ।
यस्तो हुनुमा निम्न कारणहरु हुन सक्छनः
–आवश्यकताभन्दा बढी खाना खाँदा पनि बाडुली लाग्छ । बढी मसलायुक्त भोजन खाँदा र हतार–हतार खाँदा पनि बाडुली लाग्ने गर्छ ।
–रक्सी, धूम्रपान सेवनका कारण पनि बाडुली लागिरहने समस्या देखिन्छ ।
–तनावग्रस्त, अतिउत्साहित आदि हुँदा पनि बाडुली लाग्ने गर्छ ।
–हावाको तापक्रममा अचानक बदलाव हुँदा पनि बाडुली लामो समयसम्म लाग्छ ।
बाडुली लागिरहँदा यसो गर्ने
–चिसो पानी खाने ।
–आइसक्युब मुखमा राखेर बिस्तारै चुस्ने ।
–दालचिनीको एक टुक्रा मुखमा हालेर केही बेर चुस्ने ।
–गहिरो सास फेर्ने ।
–लसुन वा प्याज सुँघ्ने ।
–जिब्रोमुनि चक्लेट अथवा चिनी राखेर चुस्ने । एजेन्सीको सहयोगमा
पहिलोपटक योनसम्पर्क ? जानि राख्नुस् यी कुरा
१५ पुष २०७७, बुधबार १४:३०
शरिरको विभिन्न भागमा हुने फरफराइले के संकेत गर्छ ? थाहा पाईराखौ
१२ माघ २०७७, सोमबार २२:३४
केटीसँग मन जितेर च्याटमा यसरी गर्नुहोस कुरा
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १३:१४
यसरी हुन्छ पायल्स ? यी विधी अपनाउनुहोस् हप्ता दिनमै हुन्छ चट् (टिप्स सहित)
१२ असार २०७८, शनिबार ११:२५